Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (အပိုင်း-၂) - News @ M-Media
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (အပိုင်း-၂)
in ဆောင်းပါး — September 20, 2017
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin (အပိုင်း-၁) ဖတ်ရန်
Genocide ဝေါဟာရ၊ Genocide ဥပဒေ ရဲ့ ပဲကိုင်ရှင် Dr.Raphael Lemkin
လူသားဆိုတာ Homo sapiens၊ လူသားရဲ့ Genus နဲ့ specie ပေါ့ဗျာ၊
နောက်ပြီးကျနော်တို့ သိတဲ့ bacteriocidal , fungicidal အဲ့စာလုံးတွေမှာ ပါတဲ့ cidal ဆိုတာ သတ်တာပေါ့ဗျာ။
Raphael က Genus ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ Cidal ကို ပေါင်းပြီး Terminology အသစ်တခု ထွက်လိုက်တယ်ဗျ။
(ဂရိ word ”Genos”= tribe or race နဲ့ လက်တင် word ”Caedere” ကို ပေါင်းပြီးတီထွင်လိုက်တယ်လို့ပြောရင် ပိုတိကျမယ်ဗျ )
စတင်ကြားရတဲ့ လူတယောက်ဟာ ဒီ word ကြောင့် စိတ်နှလုံးကို ဆွဲညှစ်လိုက်သလို ခံစားရတယ် လို့ပြောတယ်။
Genocide ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ ? ဒီစာလုံးရဲ့ ဖြတ်သန်းမှု ခရီးစဉ်တွေ ၊ သူ့ရဲ့ လူ့သမိုင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဟာ ကြီးလွန်းလှပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သာမန်လူတွေအဖို့ သတိမမူမိလောက်အောင်ကို ဒီစာလုံးက မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟို တခုလိုငြိမ်သက်နေ တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလှုပ်ပီဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတွေ ပြိုကွဲတတ်တယ်၊ ပထဝီ သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။
ကျနော့် အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့ လူတယောက်အကြောင်းရေးရာကနေ Genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရှင်းဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒါဟာ ကျနော်လို သာမန်လူတယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ မထိုက်တန်ပေမယ့် post ရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Genocide နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
၁။ ဒီစကားလုံးရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရမှု
၂။ ဒီစကားလုံးကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမလဲ
၃။ ဒီစကားလုံးဟာ ဘယ်လောက်ထိ လူသားသမိုင်း ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ သက်ရောက်မှု ရှိသလဲ
ဆိုတာတွေကိုတော့ ရှင်းမှ ရမှာပါ
၁။ genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရမှု
-genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာ Raphael Lemkin က စတင်တီထွင် သုံးစွဲခဲ့တယ် သုံးစွဲစွဲချင်း လူတွေဟာ လက်ခံပြီး ဆက်လက်သုံးစွဲကြတယ်
-အဘိဓါန်ပြုစုရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ တက္ကသိုလ် အသီးသီးကလဲ ဒီစကားလုံးကို english word တခုအဖြစ်လက်ခံပြီး အဘိဓါန်တွေမှာ ထည့်သွင်းပေးခဲ့ကြတယ်။
-ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး ဖွဲ့ခဲ့တဲ့ နျူ ရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးရဲ့ စီရင်ချက် အချို့ မှာ ဒီစကားလုံးကို သာမန်အင်္ဂလိပ် စကားလုံး တလုံးအနေနဲ့ သုံးစွဲခဲ့တယ်။
-၁၉၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၉ မှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံက Genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဆင့်သဘောတူ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး Genocide ဟာ ဥပဒေအရ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်တဲ့ စကားလုံးတလုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်
(ဒီအဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ Raphael ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေကြောင့် သူ့ကို Genius လို့ ကျနော်က ယူဆတာပါ)
၁၉၄၈ နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံအသီးသီးက genocide တားဆီးရေးအတွက် ဥပဒေပြဌာန်းတာတွေ။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ကျော်မှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးဖွဲ့ပြီး genocide ဆိုတဲ့ နာမည်တပ်ပြီး တရားစွဲတာတွေ ၊ဒီလို steps တွေလဲ ရှိပါသေးတယ်။
(Genocide ဖြစ်စဉ် အဆင့် ၇ ဆင့် အကြောင်း ဖတ်လိုလျင် Link)
၂။Genocide ကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမလဲ
(ကျ နော့် အရည်အချင်းနဲ့ မလုံလောက်နိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်မို့ မရေးမဖြစ်လို့သာရေးရတယ် နားလည်ပေးကြပါ)
Genocide ကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ကြတာအတွေ့များတာကတော့ ”လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု”ပါ။ တိုက်ရိုက် လုံးကောက် အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့သဘောပါ။ မှားလားဆိုတော့ မမှားပါဘူး၊
ဒါပေမဲ့ မပြည့်စုံပါဘူး၊ ”လူမျိုးတုန်း ”ဆိုတဲ့ဟာက သိပ်ပြသနာမရှိပေမဲ့ ”သတ်ဖြတ်မှု” ဆိုတာက အတော်လေးကို မပြည့်မစုံ ရှိလှပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးနားလည်အောင် ပြောရ ရင် ”သတ်ဖြတ်မှု” လို့ပြောတာက genocide က ဆိုလိုချင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲက အစိတ်အပိုင်း တရပ်ကိုပဲ ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
genocide က ဆိုလိုချင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ သတ်ဖြတ်မှုတခုတည်းကိုသာမကပဲ လူအဖွဲ့အစည်းတခုကို ထွက်ပြေးရအောင်လုပ်တာ အငတ်ထားတာ ဆေးကုခွင့်မပေးတာ စသဖြင့် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်တွေပါဝင်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုဆိုတာ လူမျိုးတမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သလို ဘာသာရေးအုပ်စုတစု ဒါမှမဟုတ် လူတန်းစားအစုအဝေးတရပ် လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
apple ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။apple ဆိုတာ အသီးတမျိုးပေါ့ဗျာ (သူ့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ characteristic တော့ ရှိတာပေါ့)။ ဒါပေမဲ့ apple လို့ တလုံးတည်းက descriptive purpose ရည်ရွယ်ချက်သာ ရှိပြီးတော့ စားဖို့ ဘုရားတင်ဖို့ ပုပ်သွားစေဖို့ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အဓိပ္ပါယ်ကို မပေးပါဘူး။
genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ သူ့တလုံးတည်းကနေတင်ကို ပေးတဲ့အဓိပ္ပါယ်က genocide လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာ genocide အကျူးလွန်ခံရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အထိရောက်ဆုံးနည်းနဲ့ ကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ genocide ကျူးလွန်သူကို အရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ ကခွဲမရအောင် တွဲပါပြီးသားပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ genocide ကို စတင်တီထွင်သုံးစွဲတဲ့ Raphael ကိုယ်တိုင်က အဲ့ဒီ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့လိုအရေးယူဖို့ကိုလဲ ကုလသမဂ္ဂမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ရှိပြီးသားမို့ပါ ရိုးရှင်းတဲ့ အတွေးလေးတွေးကြည့်မယ်။
လူတယောက် အသက်ရှင်ဖို့ စားရေး ဝတ်ရေး နေရေး ကျန်းမာရေးက မရှိမဖြစ်ပါ ၊ အဲ့လိုလူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်(လူမျိုးတမျိုး) ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့က လဲ စား၊ဝတ်၊ နေ ရေး ကျန်းမာရေးက မရှိမဖြစ်အပြင် နောက်မျိုးဆက် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ရှင်သန်ဖို့ မျိုးပွားခွင့် ပညာလက်ဆင့်ကမ်းခွင့် ကပါ ထပ်ပါလာ ပါတယ်။ ဒါဆို လူမျိုးတရပ် ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ စား ဝတ် နေရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး မျိုးဆက်ပွားခွင့် နဲ့တင် လုံလောက်ပြီလား။
မလုံလောက်သေးဘူး။ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ဘာသာစကား ထုံးတမ်းဓလေ့ စသဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ ထပ်ပေါင်းရသေးသဗျ၊ ဒီတော့ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်တွေကို မရ ရှိစေရန် လျော့နည်းစေရန် ယိုယွင်းစေရန် လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ genocide အောက်မှာ အကျုံးဝင်လာပါတယ်။
ဒါဆို လယ်ယာလုပ်ကိုင် ခွင့်မပေးတာ (လယ်သ်ိမ်းတာ,လယ်ယာပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဆည်းပစ်တာ) genocide အထမြောက်တယ်ပေါ့ (လယ်လုပ်မရတော့ စားဖို့ အစာ မရတော့ဘူးလေ)
ဟ ဒါဆို လယ်တွေသိမ်းနေတာ genocide ပေါ့။ မဟုတ်သေးဘူးဗျ၊ genocideဆိုတာ အဲ့လို action တွေအပြင် intention တခုပါမှ ၊ ဘာ intention လဲဆိုတော့ ”မနုသလူသား အဖွဲ့အစည်းတရပ်(အမျိုးအနွယ်စု တစု)ကို အလုံးစုံဖြစ်စေ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ ဖျက်ဆီးဖျောက်ဖျက်လို သော” ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဗျာ။
ဆေးတက္ကသိုလ် part 1 forensic မှာ သင်ရတဲ့ homicide=လူသတ်မှုမှာ ပါတဲ့ ”သေစေလိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်”ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ် မရှိဘူးဆိုတာကို ဘာနဲ့ ဆုံးဖြတ်မလဲ။ အသေးစိတ်တွေရှိပေမဲ့ အကုန်မရေးတော့ဘဲ ထင်သာမြင်သာနိုင်တဲ့ အချက်တချို့ကိုသာ ရေးပါတော့မယ်။
ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ လူမျိုးစု ကို နှိမ်ပေါက်နဲ့ မလိုလားတဲ့ နာမည်နဲ့ တံဆိပ်ကပ်တာ၊ ဥပမာ သူတို့ရဲ့မူလနာမည်ကို မခေါ်ဘဲ ဖားပြုပ်ကောင်တွေ၊ ပိုးဟပ်တွေ၊ ဝက်တပိုင်းကောင်တွေ၊ ငမဲကောင်တွေ ၊ ဘီလူးလိုရုပ်ဆိုးကောင်တွေ အစ ရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနှိမ်ပေါက်နဲ့ ခေါ်ဖို့ကို လမ်းဘေး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အာပေါင်အာရင်းနဲ့ လှုံ့ဆော်နေရာကနေ နိုင်ငံတော်အဆင့်ပိုင် ရေဒီယို ရုပ်မြင်သံကြားကနေ လှုံ့ဆော်တာ ခေါ်ဝေါ်တာထိ ပါဝင်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝ အရ လူတယောက်အသက်ခံရတာကို ဘယ်သူမှ အကြောင်းမဲ့ ဝမ်းသာမနေပါဘူး ။ ဝမ်းမနည်းဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံး တုန်လှုပ်မိမှာပါ။ ”ဟာ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးက အတော်ပျက်နေပါလား ငါတို့တောင်လုံခြုံပါ့မလား”ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးက တော့ တချက်တော့ ဝင်လာမိမှာပါ။
အဲ့လိုလူ့သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဟာ အဲ့ ဝက်တပိုင်းကောင်တွေ အသတ်ခံရတာ ဝမ်းသာတယ် ချသာချ ဟေးဟားနဲ့ လူအုပ်စုဖွဲ့ပြီး ထောက်ခံမှုတွေရှိလာရင် နိုင်ငံတွင်းမှာ ရှိတဲ့ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အစိုးရက လွန်ကျူးနေတာကို မြင်ပါလျက်နဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေတာ သို့မဟုတ် ဗြောင်ဖြစ်စေကြိတ်ပုန်းဖြစ်စေ အားပေးထောက်ခံတာ။
ဒါတွေဟာ genocide မှာပါတဲ့ intention ရှိနေပီဆိုတာရဲ့ warning sighs တွေထဲကတချို့ပါပဲ၊
ဒါဆို genocide ကို ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျူးလွန်ကြသလဲ။ ကျနော်တို့ မျက်စိထဲ ပြေးမြင်တာက နာဇီတွေက လူတွေကို စခန်းထဲထည့် ဓါတ်ငွေ့တွေလွှတ် အလောင်းတွေကိုမီးရှို့ စသဖြင့် ပေါ့
ဟုတ်ပါတယ် ဒါက လူသိများတဲ့ နာဇီတွေရဲ့ နည်းလမ်းတွေပေါ့ ၊တခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်အပေါ်မှာ ရေးပြီးသားပါ။ စား ဝတ် နေရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး မျိုး ဆက်ပွားခွင့် နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ယိုယွင်းအောင် ပျောက်ပျက်အောင် လုပ်တဲ့နည်းတွေ အများကြီး အများကြီး ရှိပါတယ်။
intention + လယ်သိမ်းတာ
intention + ငါးဖမ်းခွင့်မပေးတာ
intention+ စပါးတွေကို သိမ်းယူသွားတာ
intention+ အတင်းအကြပ် သားဆက်ခြားစေတာ
intention+ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကို ဖြစ်စေ တယောက်ချင်းကို ဖြစ်စေ သတ်ဖြတ်တာ
စသဖြင့် စသဖြင့် အစုံအလင်အပါပဲ
ဟုတ်ကဲ့ genocide ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ကြစို့လားဗျာ။ (genocide ဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအဖို့ 8 stages of genocide ဆိုပြီး စနစ်တကျ ရေးသားထားတဲ့ စာတမ်းတွေမှာ ဆက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်)
၃။Genocide က ဘယ်လောက်အထိ လူသားသမိုင်း မှာ သက်ရောက်မှုရှိသလဲ
ဒါကို ဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲဆိုတော့ genocide က ပြဌာန်းထားတဲ့ ကျူးလွန်သူကို အရေးယူရေး နဲ့ အကျူးလွန်ခံရသူကိုကာကွယ်ပေးရေး ဆိုတဲ့ အချက်တွေက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပထဝီနိုင်ငံရေး အပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ထိသက်ရောက်မှု ရှိသလဲ ၊ သက်ရောက်မှုက ဘယ်လောက်ထိတာရှည်ခံသလဲ ဆိုတာတွေနဲ့တိုင်းတာရမှာပါ။
ဒီအတွက် ဥပမာ အနေနဲ့ ၂၀ရာစု အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Kosovo ခွဲထွက်ရေးကိစ္စကို ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဘာလို့ ကျနော် Kosovo ကို ရွေးရသလဲဆိုတော့ Kosovo ကိစ္စဟာ genocide awareness အရှိဆုံးအချိန်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့လို့ပါ
၁၉၉၈ ခုနှစ် information analysis လုပ်ရတဲ့ CIA အရာရှိဟာ ဓါတ်ပုံတပုံကို ကြည့်နေပါတယ်။ ဓါတ်ပုံကတော့ မှောင်မည်းလှတဲ့ ကောင်းကင်ကိုနောက်ခံထားလို့ တလက်လက်နဲ့တောက်ပနေတဲ့ ကြယ်စုလေးတွေကို မြင်နေရသလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဓါတ်ပုံက ကောင်းကင်ကြီးကို ရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘဲ၊ ကောင်းကင်ထဲက ဂြိုဟ်တုကနေ ကမ္ဘာမြေပြင်ကို ပြန်ရိုက်ထားတာပါ။ ကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့ ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ ဥရောပတိုက် ဆားဗီးယားနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်း ကိုဆိုဗို ဒေသ လေးကိုပါ။
မည်းမှောင်နေတာကတော့ ကိုဆိုဗိုဒေသ ရဲ့တောအုပ်တွေဖြစ်ပြီး တလက်လက်နဲ့ တောက်ပနေတာတွေကတော့ တောအုပ်ထဲမှာ ဖိုထားတဲ့ မီးဖိုလေးတွေပါ။ ဘယ်သူတွေက မီးဖိုထားလဲဆိုတော့ ဆာဘ်လူမျိုး ပုလိပ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေက လိုက်သတ်နေလို့ ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေရတဲ့ ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယန်း တွေက ဖိုထားတာပါ။ CIA အရာရှိအနေနဲ့ ဒီလို ဓါတ်ပုံများစွာကို ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအတွင်းမှာ ခဏခဏ မြင်ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ဆားဗီးယား နိုင်ငံရဲ့ ကပ်ရပ် အိမ်နီးချင်း ဘော့စ်နီးယား နိုင်ငံအတွင်းမှာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက မီးဖိုလေးတွေ ဖိုခဲ့ရသူတွေကတော့ ဘော့စ်နီးယန်း လူမျိုးတွေပါ။
အဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို အမဲလိုက်သလို လိုက်ပြီးသတ်ဖြတ်ခဲ့သူတွေကလဲ ဆာ့ဘ်လူမျိုး ပုလိပ်တွေနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေပါပဲ။ ဆားဗီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မီလိုစီဗစ် ဟာ ဘော့စ်နီးယား မှာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲတွေ မုဒိန်းကျင့်စခန်းတွေ ချွေးတပ်စခန်းတွေ တည်ဆောက်ပြီး ဆာဘ်လူမျိုး မဟုတ်သူတွေကို မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်လျက် ကြီးမြတ်လေသော မဟာ ဆားဗီးယား နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ဖို့ ကြံရွယ်ခဲ့သူပါ။
သူ့ရဲ့ အကြံအစည်တွေဟာ ဘော့စ်နီးယားမှာ မအောင်မမြင်နဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောလို့ရပေမဲ့ ဆာဘ်လူမျိုး မဟုတ်သူ ၃သိန်းနီးပါးလောက်ကိုတော့ မျိုးဖြုတ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မီလိုဆီဗစ်အနေနဲ့ ဆားဘ်လက်နက်ကိုင်တွေအားလုံး ဘောစ်နီးယားကနေ ထွက်ခွာ ဖို့ အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ NATO အဖွဲ့နဲ့ သဘောတူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသိန်းချီသတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ မီလိုဆီဗစ် အနေနဲ့ တရားစွဲခံရခြင်း အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်း တစုံတရာ မရှိပဲ ဆားဗီးယား နိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတ အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မီလိုဆီဗစ် ရဲ့ မဟာဆားဗီးယား အိပ်မက်ဟာ ဆက်လက်မက်လို့ကောင်းဆဲပါပဲ
ဒီတခါ သူ့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်မဲ့နေရာကတော့ ဆားဗီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ကိုဆိုဗို ဒေသလေးပါပဲ။ ဒီဒေသ မှာ ၁၂ရာစုကတည်းက အခြေချနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်း လူမျိုး တွေနဲ့ ဆာဘ်လူမျိုးတွေဟာ ရန်စောင်နေခဲ့ကြတာပါ ၊ ဘော့စ်နီးယားတုန်းက NATO အဖွဲ့ကို အလျော့ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက် မဟာဆားဘီးယားခေါင်းဆောင်မီလိုဆီဗစ် အဖို့ ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ သိက္ခာတွေကို ပြန်ဆည်ဖို့ ကိုဆိုဗို ဟာ နေရာကောင်းပါပဲ၊ မီလိုဆီဗစ်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကတော့
-ကိုဆိုဗိုမှာ ရှိတဲ့ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။
-အစိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲက အလ်ဘေးနီးယန်း လူမျိုး တွေကို အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
-အလ်ဘေးနီးယန်း ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။
အလ်ဘေးနီးယန်းတွေက ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက် လုပ်တော့ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကိုင်တွယ်ပစ်လိုက်တယ်။
မဟာဆားဗီးယား ခေါင်းဆောင် သမ္မတကြီးမီလိုဆီဗစ်ဟာ ဆာဘ်လူမျိုးတွေရဲ့ အလည်မှာ အမျိုးသားရေးကယ်တင်ရှင်ကြီးအဖြစ် ဂုဏ်တက်လာပါပြီ။
အလ်ဘေးနီးယန်းတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကတော့ KLA ခေါ် Kosovo Liberation Army ပါပဲ။ ရသမျှ ပိုက်ဆံစု နီးစပ်ရာကနေ လက်နက်ဝယ် ပြီး ဆာဘ်စစ်တပ် နဲ့ ရဲစခန်းတွေကို ခြုံခိုတိုက်တာတွေ ဝင်စီးတာတွေ လုပ်တော့တာပါပဲ။ ဒါဟာ မီလိုဆီဗစ် လိုချင်တဲ့အကွက်ပါပဲ။ KLA ကို အကြောင်းပြပြီး ဆာဘ်တပ်မတော်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ အလ်ဘေးနီးယန်း တွေကို အကြမ်းဖက်လို့ တံဆိပ်ကပ်ခွင့်ရပြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် မောင်းထုတ်ခွင့် လိုင်စင် ရတဲ့သဘောပါ။ မီလိုဆီဗစ် အတွက် အားသာချက်က ကိုဆိုဗိုဟာ ဆားဗီးယား အချုပ်အချာအာဏာ ပိုင်နက်အတွင်းက နယ်မြေဖြစ်ပြီး KLA ဟာလဲ အမေရိကန်ရဲ့ အကြမ်းဖက်စာရင်းသွင်းခံထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်နေတာပါပဲ။
မီလိုဆီဗစ် ရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ဘောစ်နီးယားမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို Kosovo မှာ ပြန်မြင်လာရတဲ့ CIA အငယ်တန်းနဲ့ အလတ်တန်း အရာရှိတွေဟာ အထောက်အထား အစုံအလင်နဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစုံတရာ action ယူလာလိမ့်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မထား ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘော့စ်နီးယားမှာတုန်းကလဲ သူတို့ ဒီလို အစီရင်ခံစာတွေ တင်ဖူးပေါင်းများလှပါပြီ
အမေရိကန် အစိုးရ ကတော့ မလွဲမရှောင်သာမှပဲ action ယူခဲ့တာပါ။
(ဆာ့ဘ်တွေဟာ ဘော့စ်နီးယားမှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အစောင့်အရှောက်နယ်မြေကို ဝင်တိုက်ပြီး UN ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်တွေကို ဓါးစာခံဖမ်းပြီး အစောင့်အရှောက်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ အရပ်သား ၇၀၀၀ လောက်ကို သတ်ပစ်တာတောင် ရက်အတော်ကြာမှ အမေရိကန် အစိုးရက စစ်ရေးအရ တိုက်ရိုက်ဝင်ဗျင်းဖို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ရှိပါတယ်)
ဒါပေမဲ့ Kosovo ကတက်လာတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို US အစိုးရ တုန့်ပြန်ပုံ အတော်လေးတက်ကြွနေပါတယ်။
KLA အဖွဲ့ကို အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ အကြမ်းဖက် စာရင်းသွင်းထားပေမဲ့ CIA ကို KLA နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခိုင်းထားပါတယ်။ တခြား ဥရောပ ထောက်လှန်းရေး အဖွဲ့တွေကတော့ KLA ကို လေ့ကျင့်ပေးတာ ဆက်သွယ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်ပေးတာတွေ လုပ်နေပါပြီ။ ကိုဆိုဗို အလ်ဘေးနီးယန်း ကိုယ်စားလှယ်က မီလိုဆီဗစ် နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆာ့ဘ်တွေအနေနဲ့ ညှာတာဖို့ ချင့်ချိန်ဖို့ မပြောတော့ပဲ ”ဆက်မိုက်ရင်တော့ ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ချိနဲ့သွားဖို့သာပြင်ထား ”လို့ သတိပေးစကားပြောတဲ့ အနေအထား ရောက်နေပါပြီ။
ဒီလို ဆာ့ဘ်လူမျိုးကြီးဝါဒီ မီလိုဆီဗစ်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်ပြီး ဝိုင်းဗျင်းဖို့ ဖြစ်လာစေတာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ ”Genocide ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ လှုပ်ရှားမှု”က တည်ရှိနေတာပါ။
ဘယ်သူတွေက လှုပ်ရှားတယ် ဘယ်လို ပါဝင်တယ် ဆိုတာကတော့ လူသိမများလှပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလို လှုပ်ရှားသူတွေဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို လူရှေ့သူရှေ့ထွက်ပြီး မိန့်ခွန်းချွေ တာ မီဒီယာတွေမှာ နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တာမျိုး မရှိရုံမျှမက အဲ့လို လူသိမှာကိုတောင် မကြိုက်လှသူတွေပါ။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန စစ်ရာဇဝတ်မှု ဥပဒေချုပ် နောက်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတ ကိုယ်တိုင်က genocide လို့ သုံးစွဲပြောဆိုမှုဟာ နောက်ကွယ်မှာ genocide နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ဥပဒေအရ လှုပ်ရှားမှုတွေရှိကြောင်း ထင်ရှားစေပါတယ်
အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ NATO တောင်းဆိုတာတွေက
-Kosovo မှာ ရှိတဲ့ ဆာ့ဘ်လက်နက်ကိုင်တွေ ထွက်ခွာ၊
-အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာ ပြန်ပေး၊
-Kosovo မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၅,၀၀၀ တပ်စွဲခွင့်ပေး၊
မီလိုဆီဗစ်ကတော့ ဒီအချက်တွေဟာ ဆားဗီးယား နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာကို ထိပါးလို့ လက်မခံနိုင်ဘူး အကြောင်းပြန်ပါတယ်။
NATO က Kosovo မှာရှိတဲ့ ဆာ့ဘ် လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို အမြင့်ပေ ၁၅၀ ၀၀ အထက်ကနေ ဗုံးကြဲပါတော့တယ်။
ဆာ့ဘ်တွေဘက်က တုန့်ပြန်မှုက ရှိသမျှ အလ်ဘေးနီးယန်းတွေကို အိမ်တွေကနေမောင်းထုတ်၊ အလ်ဘေးနီးယန်း အမျိုးသားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ပြီးတုန့်ပြန်ပါတယ်။
NATO ဘက်က ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကို အစင်းရေ ၁၀၀၀ ထိ တိုးမြှင့်သုံးစွဲ အနီးကပ် ပစ်နိုင်တဲ့ Helicopter Gunship တွေပါ ထပ်ပေါင်းပါတယ်။ ပစ်မှတ်တွေကိုလဲ Kosovo ဒေသ တခုတည်းကိုပဲ ကန့်သတ်ချက်မထားတော့ဘဲ ဆားဗီးယား တနိုင်ငံ လုံးကို ထည့်သွင်းစေတယ်။ ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ဘဲလ်ဂရိတ် ကိုလဲ ဗုံးစာကျွေးပါတယ်။ ဆားဘီးယား တပ်မတော်အတွက် ဆက်သွယ်ရေး signal တွေ တဆင့်ခံပို့ပေးနေတဲ့ တရုတ်သံရုံးကိုလဲ ဗုံးကြဲပါတယ်
(နောက်မှ မြေပုံမှားလို့ မှားပစ်မိကြောင်း တောင်းပန်ပါတယ်)
လူမျိုးကြီးဝါဒီ မီလိုဆီဗစ် ကို ထောက်ခံနေဆဲ ဆာ့ဘ်လူမျိုးတွေ ကို ဦးကျိုးစေဖို့ စစ်ဘက်ပစ်မှတ်သာမက အရပ်ဘက် ပစ်မှတ်တချို့ကိုပါ တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဆားဘီးယား အသံလွှင့်ဌာန နဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုင်းတွေကိုပါ။ ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ မနက်ခင်းကော်ဖီဖျော်သောက်ဖို့တောင် ခက်ခဲသွားပြီး တနိုင်ငံလုံး အမှောင်ထဲ အအေး ထဲမှာ ငုပ်တုပ်ထိုင်ရတဲ့ အဖြစ်ရောက်သွားပါတယ်။
ရလဒ်တွေကတော့ ဆာ့ဘ်တပ်မတော်ဟာ မီလိုဆီဗစ် အတွက် စစ်တိုက်မပေးနိုင်ကြောင်း ဖြစ်လာပြီး တပ်ပြေးတွေလဲ အလွန်များသွားတာပါ။
NATO က ၇၈ ရက်ကြာအောင် ဗုံးကြဲပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ဆာ့ဘ်လက်နက်ကိုင်တွေဟာ Kosovo ကနေ ထွက်ခွာရပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ Kosovo ဟာ သီးခြားလွတ်လပ်သောအချုပ်အချာ အာဏာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပက အသ်ိအမှတ်ပြု လိုက်ကြပါတယ်။
မီလိုဆီဗစ် ကိုတော့ နောက်တက်လာတဲ့ ဆားဗီးယား အစိုးကကိုယ်တိုင်က ဖမ်းဆီးပြီး (ယူဂိုဆလားဘီးယားအတွက်သီးသန့်ဖွဲ့တဲ့)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံးကို ပို့လိုက်ပါတယ်။
ဆားဘီးယားကို ဗုံးကြဲဖို့အတွက် NATO ဟာ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်တောင် မယူခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်စဉ်ဟာ ကျနော်ရေးသလောက် အစဉ်မချောလှပါဘူး။ အသေးစိတ်သိလိုသူများ ရှာဖွေပြီး ဖတ်ရှုစေလိုပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ Raphael Lemkin အကြောင်းပဲဆက်ရေးပါတော့မယ်။
၁၉၄၅၊ မတ်လမှာ ဂျာမနီဟာ ချွင်းချက်မရှိ လက်နက်ချပြီး ဥရောပစစ်မျက်နှာမှာ စစ်ကြီးဟာ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတခု အပြီးမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အလောင်းတွေ သွေးညှီနံ့တွေနဲ့ ဥရောပမြေဟာ နံဟောင် ပုပ်အဲ့နေပါတယ်။ ဒီအလောင်းတွေ သွေးတွေထဲကမှ အနံစော်ဆုံး အပုပ်အဲ့ဆုံး အနံ့တွေဟာ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေကို အော့နလုံးအနာဆုံးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအနံ့က ပြင်းထန်ကြီးမားတဲ့ လူသိန်းချီသေခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ရာကနေ ထွက်ပေါ်လာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေနဲ့ ဝေးကွာတဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့ သံဆူးကြိုးကာစခန်းတွေ ကနေ ထွက်ပေါ်လာနေတာပါ။ ဒီစခန်းတွေထဲကို ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သိန်းချီတဲ့ ယောက်ျား မိန်းမ ဂေး ကလေး လူငယ် လူလတ် လူကြီး အဘိုးအဘွား အစုံအလင်ဟာ အရိုးပေါ်အရေတင် ပိန်ခြုံးလျက် မသေရုံတမယ် ရှိနေကြပြီး အဲ့လိုပိန်ချုံး နေတဲ့ အရွယ်စုံ လူသေအလောင်းတွေဟာလည်း ပုံအောလျက် တချို့လဲ တဝက်တပျက်လောင်ကျွမ်းထားတဲ့ အလောင်းတွေ တချို့လည်းပြာကျအောင် မီးရှို့ထားတာတွေ၊ မိုးထိအောင် မြင့်မတက် ထိုးထောင်နေတဲ့ မီးရှို့ စက်ရုံခေါင်းတိုင်တွေ၊ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသေ မြုပ်ထားတဲ့ ကျင်းကြီးတွေ၊ အရှင်လတ်လတ် ဦးနှောက် ရင်ဘတ် ဗိုက် ခွဲစိတ်ခံထားရပြီး မသေမရှင် ဖြစ်နေသူတွေ၊ သေနေသူတွေ၊ မြင်ရ ရုံနဲ့ ရူးသွားနိုင်စေတဲ့ နာဇီဂျာမန်တွေရဲ့ သေမင်းတမန်စခန်းတွေပါ။
ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာ ဂျာမန်တွေနဲ့ သူတင်ကိုယ်တင် ဖိုက်လာတဲ့ မဟာမိတ်စစ်သည်တွေပါ ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ပြီး shock ရကုန်ပါတယ်။
အသွေးနဲ့အသားနဲ့ လူလူချင်း ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဆိုတာ တကယ်ပေါ့။
သမိုင်းစာအုပ်တွေမှာသင်ရတဲ့ မွန်ဂိုစစ်ဘုရင်ဂျင်ဂျစ်ခန်က လူသန်းချီသတ်ပစ်တယ်ဆိုတာ ပုံပြင်လို ဖတ်ခဲ့ကြတာ ခုငါတို့ရှေ့တင် မျက်ဝါးထင်ထင်ပါလား၊ ပိုဆိုးတာက စစ်တိုက်နေတဲ့ရှေ့တန်းမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ နောက်တန်းမှာ သွေးအေးအေးနဲ့ ဒီလိုတွေ လုပ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့။
shock ရတဲ့သူက အူကြောင်ကျားနဲ့ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်းစာရင်းချုပ်လိုက်ရင် နာဇီဂျာမန်တွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ဂျူးလူမျိုး ၆သန်း နဲ့ ဂျူးမဟုတ်သူ ၅သန်း သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။
ဒီလုပ်ရပ်ကြီးကို ဘယ်လို နာမည်ပေးမလဲ?
၁၉၄၄ ခုနှစ်တုန်းကတည်းက Raphael Lemkin က Genocide ဆိုပြီး နာမည်ပေးပြီးသားပါ/
Raphael အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက သူရဲ့ မိဘ အပါအဝင် ဆွေမျိုးအရင်းအချာ ၄၉ ယေက်ပါ နာဇီတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အသက်ပျောက်ခဲ့ရှာတာပါ။
ဒါတွေကို Raphael ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ
Raphael ရဲ့တုန့်ပြန်မှုကို မပြောခင် စစ်အတွင်းအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို တုန့်ပြန်သလဲအရင်ပြောကြမယ် ။ ဒါမှ relative သဘောနဲ့ parallel thinking ရမှာပါ။
အနောက်ဥရောပ မဟာမိတ်တပ်တွေအဖို့ နာဇီတွေရဲ့ ငရဲခန်းတွေဟာ စစ်ကြီးပြီးခါနီးမှ ပြူးတူပြဲတဲစတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း အရှေ့ဘက်စစ်မျက်နှာမှာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ ဆိုဗိယက် red army အဖို့တော့ သိပ်မဆန်းလှဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။
ဆိုဗိယက်ကိုဝင်တိုက်တဲ့ ဂျာမန်တပ်တွေရဲ့ ခံယူချက်ကလဲ ရှင်းပါတယ်။ ရုရှားဆိုတာ ဂျာမန်တွေကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ဖြစ်လာရတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ဒီစစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီး ရုရှားတွေကို အပိုးကျိုးအောင် လုပ်နေရတယ်လို့ ခံယူထားကြတာပါ။ ဥပမာ- ဆောင်းတွင်းမှာအေးခဲနေလို့ အချမ်းပြေစေရန် ပတ်ချာလည်မှာရှိတဲ့ ရုရှားရွာတွေကို မီးတိုက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ ဂျာမန်တပ်တွေရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လိုတောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ တခြားရက်စက်မှုတွေဆိုတာ ထူးပြောနေစရာမရှိပါဘူး။
ဒီတော့ ရုရှားတွေ အနိုင်ပြန်ရလာတဲ့ အခါ ဖမ်းမိလာတဲ့ နာဇီတွေကို ဘယ်ရုရှားကမှ အထူးတလည် တရားရုံးတင်မနေပါဘူး။ ထောက်လှမ်းရေး စစ်ချက်ယူပြီး စစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာ အသုံးမလိုတော့ဘူးထင်ရင် နေရာတင်ပဲ သတ်ပစ် လိုက်တာပါ။ မသတ်ဘူးဆိုရင်လဲ ရုရှားအရှေ့ခြမ်း ဆိုင်ဘေးရီယား(၁၂ ရာသီနှင်းခဲဒေသ) ပို့ပြီး အသက်အန္တရာယ် ရှိတဲ့ မိုင်းတူးတဲ့ အလုပ်တွေကို ခိုင်းပါတော့တယ်။ မသေမချင်းခိုင်းတာပါ
ဆိုဗိယက်တပ်တွေ ဂျာမနီရဲ့ အရှေ့ပိုင်းကို ဝင်တိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ အရပ်သားဂျာမန်တွေဟာ စစ်ဒဏ်ကို ပက်ပက်စက်စက် ခံရပါတယ်။ ဂျာမန် အမျိုးသမီးတွေဟာ လူရာချီပါတဲ့ ရုရှားတပ်ခွဲတွေရဲ့ မုဒိန်းသားကောင်တွေ အဖြစ် သက်ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုဗိယက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလဲ ဒီလောက်မဟာလူမျိုးကြီးချင်တဲ့ ဂျာမန်တွေ ကို ဒီလို ဦးချိုးပစ်ပစေ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ လွှတ်ထားပေးလိုက်တာ သားကောင်ဖြစ်ရသူ ဂျာမန်အမျိုးသမီးပေါင်း ၂သန်းကျော်သွားပါတယ်
ရုရှားတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို revenge လို့ပဲ နာမည်ပေးရမှာပါ။
”အနောက်ဥရောပ+ အမေရိကန် ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု”
သူတို့ကတော့ နာဇီတွေကို punishment ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ revenge မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီအတွက် နျူ ရင်ဘတ် စစ်ခုံရုံးကို ဖွဲ့ပါတယ်။ Raphael ဟာ ဒီခုံရုံးမှာ ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါတယ်။
ကျား နဲ့ ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့ပီလား
နျူ ရင်ဘတ် ခုံရုံးမှာ နာဇီတွေကို အဓိက စွဲချက်တင်တာကတော့
-နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်တွေကို ဖြတ်ကျော်စစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲ ပြီး သူတပါးနိုင်ငံတွေကို ကျူးကျော်တာ
-သိမ်းပိုက်ခံ နယ်မြေတွေမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တာ
ဒီစွဲချက်တွေနဲ့တင် နာဇီတွေကို သေဒဏ်ဆယ်ပြန်ပေးလို့ရနေပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့ လူတယောက်ကတော့ ဒီစွဲချက်တွေဟာ မလုံလောက်ဘူး။ နျူ ရင်ဘတ်စစ်ခုံရုံးဟာ နာဇီတွေကို အရေးယူဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဥပဒေ အင်အားချို့တဲ့နေတယ် စသဖြင့် အဆက်မပြတ်ထောက်ပြနေပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့လူတယောက်ပါ။
ဒါပေမဲ့ သာမန်လူ သာမန်ရှေ့နေပေါက်စလေးမဟုတ်တော့ပါဘူး။
နျူ ရင်ဘတ်စစ်ခုံရုံးအတွက် အကြံပေးအရာရှိအဖြစ်ခန့်အပ်ခံထားရသော ယေးလ်ဥပဒေတက္ကသိုလ်က ကထိက ပါ။
နာဇီတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အရင်းအချာ မိသားစု ၄၉ယောက် ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ လူတယောက်ပါ။
ဒါဆို သူက နာဇီတွေကို revenge လုပ်ချင်နေတာလား။
ဒါဆိုလဲ လက်ရှိစွဲချက်တွေနဲ့တင် နာဇီတွေကို သေဒဏ် punishment ၁၀ ဆ ပေးလို့ရနေပီလေ ၊ ကျေနပ်တော့ပေါ့။
Raphael လိုချင်တာက နာဇီတွေရဲ့ ပြစ်ချက်တွေကို genocide နဲ့ စွဲချက်တင်ပြီး အပြစ်ပေး နောက်နောင်လဲ နာဇီတွေလို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက် စံပြစီရင်ချက် ဖြစ်စေဖို့ပါ။
လက်ရှိစွဲချက်တွေအရ နာဇီတွေဟာ စစ်ပြုပြီး သူများနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လို့ စစ်ကာလ အတွင်းရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်လို့သာ စွဲချက်တင်ခံနေရတဲ့သဘောပါ။
Raphael ဆိုလိုချင်တဲ့ genocide နဲ့ စွဲချက်ဆိုတာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မစခင်ကတည်းက နာဇီတွေဟာ ဂျူးလူမျိုးတွေကို ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားအဖြစ်နှိမ့်ချ ခွဲခြားတံဆိပ်ကပ် စသဖြင့် (ရှေ့မှာကျနော်ရေးခဲ့တဲ့) warning signs တွေကစပြီးတော့ စွဲချက်တင်စေချင်တာပါ။ ဒီအတွက် Raphael ဟာ ရုံးတော်မှာ ရှေ့နေတွေကို နားပူဆာတိုက်ဆုံး ခုံရုံးကို မထောက်မညာ ဝေဖန်နေတဲ့ အကြံပေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ခုံရုံးက ရှေ့နေတချို့ ကဆို Raphael ကို ” ခင်ဗျားက နာဇီတွေကိုသေဒဏ်ပေးဖို့ အဓိက မထားဘဲ ၊ genocide နဲ့စွဲချက်တင်ဖို့ပဲ အဓိကထားနေသလား” လို့ ပြန်မေးတဲ့အထိပါပဲ
ဒီလို အငေါ်တူးတာတွေရှိပေမဲ့လည်း အမှုတချို့မှာ genocide ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို descriptive purpose အနေနဲ့ စတင်သုံးစွဲပါတယ်။ Raphael လိုချင်တဲ့ Legal term တခုအနေနဲ့ သုံးစွဲတာတော့မရှိပါဘူး။
နာဇီတရားခံက ထောင်ချီရှိပါတယ်(နာဇီတရားခံအားလုံးကို နျူ ရင်ဘတ်ခုံရုံး တခုတည်းမှာပဲ စီရင်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး)
ကျူးလွန်တဲ့ အမှုတွေက တပုံတခေါင်းကြီး ။ စီရင်ချက်တခုချဖို့ အချိန်စွဲစစ်ရင်း နာဇီတွေကို အသက်ရှည်ခွင့်ပေးနေသလိုလဲ ဖြစ်လို့လဲမရ။ ဒီကြားထဲ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့လူက genocide နဲ့စွဲချက်တင်ဖို့ လာပြောနေ ဒါဆို ဘယ်မလဲ genocide နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရေးထားတဲ့ Law Law Law genocide နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Law
ဒီ law က ခုချိန်ထိ Raphael Lemkin ဆိုတဲ့လူတယောက်က ရေးထားတာပဲ ရှိသေးတာ ၊ ဘယ်အချုပ်အချာအာဏာပိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကမှ မပြဌာန်းရသေးဘူး။ ဒီ Law ကိုပြဌာန်းဖို့က နိုင်ငံတကာ level အာဏာနဲ့ပြဌာန်းမှ တကယ်အလုပ်လုပ်လို့ရမှာ။ ဒါဆို Raphael အဖို့ နျူ ရင်ဘတ်ခုံရုံးကခွာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး နိုင်ငံတကာ level အဖြစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ United Nations -ကုလသမဂ္ဂသို့ချီတက်ပါလေတော့တယ်။